Kedu ihe kpatara na ọtụtụ ndị ọrụ na -agbazinye ego na -ahọrọ ịhọrọ igwe mkpali hydraulic na -akwagharị? Ụgbọ ala hydraulic
site na nchịkwa na 21-09-28
Ozi ịkpọtụrụ: Qingdao Daxin Machinery Co Ltd www.daxmachinery.com Email: sales@daxmachinery.com Whatsapp: +86 15192782747 DAXLIFTER nyiwe ọrụ ikuku, a na -eji scissor na -arụ ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ nwere ụzọ isi ụzọ abụọ: draịva hydraulic na draịvụ eletriki. . Yabụ, gịnị kpatara ọtụtụ r ...
Kedu ihe bụ usoro nke ikpo okwu ọrụ aluminom alloy?
site na nchịkwa na 21-09-24
Ozi ịkpọtụrụ: Qingdao Daxin Machinery Co Ltd www.daxmachinery.com Email: sales@daxmachinery.com Whatsapp: +86 15192782747 Dị ka arụmọrụ si kwuo, enwere ike kewaa nyiwe ọrụ ikuku aluminom n'ime: 1. Mobile aluminom alloy aerial work platform: a new haziri ngwaahịa ọgbọ ọhụrụ ...
Uru nke ikpo okwu eletrik na -ahọrọ DAXLIFTER
Enwere ike kewaa usoro ikpo ọkụ eletrik n'ozuzu ya na ikpo okwu na -ebuli ụgbọ ala aluminom, ikpo okwu na -ebuli ụgbọ elu scissor, na ikpo okwu na -ebuli ụgbọ ala. Agbanyeghị, ụdị ụdị ikpo okwu ọ bụla, ọ nwere ụfọdụ atụmatụ na uru pụtara ìhè, yabụ ọ dị mkpa ...
Tebụl eletriki eletrik DAXLIFTER na -ekwe nkwa mbuli ọ bụla
Ozi kọntaktị: Qingdao Daxin Machinery Co Ltd www.daxmachinery.com Email: sales@daxmachinery.com Whatsapp: +86 15192782747 N'ileba anya na mbụ, ikpo okwu eletrik adịghị iche na ikpo okwu na -ebuli elu nkịtị, mana mgbe ị bịaruru ya nso. ma metụ ya aka, ị ga -ahụ na ...
Kedu otu esi ahọrọ China Mobile Scissor Lift?
Ozi ịkpọtụrụ: Qingdao Daxin Machinery Co Ltd www.daxmachinery.com Email: sales@daxmachinery.com Whatsapp: +86 15192782747 ije enyere ike eletrik; kama ịdọrọ akwụkwọ ntuziaka, ọ na -ebelata ike ọrụ. Njikwa eletrik nke ịga ije na -azọpụta oge na mbọ. Scissor efe n'elu ọrụ p ...
Ebe ikpo okwu kacha dị n'elu ikuku na Dockyard-Self propelled Boom Lift
Ozi ịkpọtụrụ: Qingdao Daxin Machinery Co Ltd www.daxmachinery.com Email: sales@daxmachinery.com Whatsapp: +86 15192782747 ▲ Ọ nwere ike imeghari na ọnọdụ arụ ọrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri, ya bụ, ọ nwere ike rụọ ọrụ na iru mmiri, corrosive, uzuzu uzuzu. , ọnọdụ okpomọkụ dị elu na gburugburu ala dị ala ...
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /15